इन्धनको मूल्य के कारणले बड्यो यसले के प्रभाव परेको छ विश्व मा?::Jalpa Khabar
इन्धनको मूल्य के कारणले बड्यो यसले के प्रभाव परेको छ विश्व मा?
Published on: ३० कार्तिक २०७८, मंगलवार ०४:५२
इरानबाट तेल खरिद नगर्दा पनि अमेरिकालाई कुनै प्रभाव नपर्ने भनी अमेरिकाले बताइँदै आएको छ। विश्वका अन्य देशबाट हुने तेलको राम्रो आपूर्तिले पेट्रोपदार्थका लागि अमेरिकाले मागलाई सहजै सम्बोधन गर्दछ भनी अमेरिकाले भन्छ। इरानबाट हुने आपूर्तिमा कडाइ गरे वा प्रतिबन्ध लगाएमा अमेरिकामा कुनै समस्या पर्दैन भनिएको छ। विश्व तेल बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन नोभेम्बर २०१८ मा प्रतिदिन १० लाख ब्यारेल तेल निर्यातलाई घटाउन सउदी अरबले सुझाव गरेको थियो। त्यसैअनुरूप डिसेम्बर २०१८ बाट लागू हुने गरी प्रतिदिन पाँच लाख ब्यारेल तेल निर्यातमा कमी गरिएको थियो। साउदी अरेबियाले तेलको विश्व बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन यस्तो गरिएको थियो। साउदी अरबसमेत सदस्य रहेको तेल आपूर्ति गर्ने विभिन्न १४ देशको ओपेक संगठनका सदस्य देशमध्ये साउदी अरबले मात्र विश्वको एक तिहाइ कच्चा तेल बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ।